XOG:- Maxuu salka ku hayaa safarka uu ku aaday Turkiya Madxweyne shariif Xasan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ahmed weheliye Gaashaan 21 May 2018 22 May 2018
Muqdisho (Mareeg) madaxweynaha maamulka Koonfur galbeed soomalia shariif xasa shiiq aadan ayaa maanta u baxay dalka turkiya.
madaxweeyne shariif xasan oo todobaadkii hore magaalada beeydhabo ku kulmiyaya madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowlada federalka ayaa waxuu cadaadis xoog leh saarayaa xukuumada dhex, si ay dowlad goboleedyadu saameen igu yeeshaan Go’aanada siyaasadeed ee dalka.
shariif xasan shiiq aadan ayeey wararka aan ka heleeno ilo u dhaw xafiiskiisa noo sheegeen in ay macquultahy inuu la kulmo madaxdii hore ee dalka oo ku sugan turkiya.
Shariif xasan ayaa kadib soo mari doona magaalooyin kale oo aan noo suura galin inaan ogaano balse safarka madaxweeynaha ayaa salka ku haayo sidii loo sameeyn lahaa i skaashi siyaasadeed oo ka dhan ah xukuumada hada jirta, taa oo la sheegay in lagu ilaalinaayo madaxbanaanida dowlad goboleedyada dalka.
safarkan oo ah mid aaney inta badan bulshadu kawar haayin ayaa U jeedkiisa waxuu kala cadaan doono kadib safarka madxweynaha.